Home Wararka DF oo jebisay mid ka mid ah heshiiska mucaaradka ee ahaa in...
DF oo jebisay mid ka mid ah heshiiska mucaaradka ee ahaa in la bedelo taliyeyaal
Xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa shaaca ka dhigtay in heshiiska ay la gashay mucaaradka uusan jirin qodob xeerinaya in la bedelo taliyeyaasha ciidamadda qaranka.
Wasiirka amniga, Xasan Xundubey Jimcaale oo u waramay barnaamijka Galka Baarista ee idaacadda VOA-da, ayaa daaha rogay in xukuumadda aysan hadda qorshaha igu jirin bedelida taliyeyaasha.
“Taliyeyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro. Taasina waa mid u taalo maamula ra’iisul wasaaraha. Haddii ay ku timaado talo kale ee meesheeda. Qodobada aan ku heshiinay waa tobban qodob, waana cad yihiin,” ayuu yir Xundubey.
Balse, sida uu cadeeyay Xundubey, waxaa suurtagal in isbedelkaas ay ku yimaadaan “talooyin kale” oo uu ra’iisul wasaaraha xilgaarsiinta uu helo mudada uu ku guda jira arrimaha doorashadda.
Dhawaqa Xundubey ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay jireen hadalheyn ku saabsan in Rooble uu isbedel ku sameyn karo taliyeyaasha ciidamada si uu helo kalsooni badan.
Hadalheyntaas waxaa abuuray qodobka lixaad ee heshiiska ay 5-tii bishaan May ku gaareenMudisho xukuumadda iyo mucaaradka kaasoo kusoo afjaray xasaradaha iyo isku-dhacyada hubeysan.
Qodobkaas wuxuu xeerinayaa in dib-u-habeyn lagu sameeyo hogaanka hay’addaha ammaanka taasoo ay kasoo talobixinayaan guddi khuburo ah oo ra’iisul wasaaraha uu magacaabi. Lama shaacin mudada.
Heshiiskaas ayaa soo deg-degay markii ciidamadda milatariga ay ku kala qeybsamaan muddo kororsiga qaarkood soo galeen Muqdisho kuna dhawaaqdey Aqalka dalka looga armiyo ee Villa Soomaaliya.